GPS tekinoroji ichauya kuApple Watch 2 | Ndinobva mac
GPS tekinoroji iri kuuya kuApple Watch 2
Zviratidzo zvakawanda zvinoratidza kuti ichave munaGunyana apo Apple inoburitsa vhezheni yechipiri yewachi yayo, iyo Apple Watch 2. MuKeynote yekupedzisira takaona kuti hurongwa hutsva hunosvika mukudonha kweApple Watch, iyo watchOS 3, inouya sei kubva paruoko nezvakawanda zvitsva zvinoita kuti Apple itarise wedzera kuvepo kwako muhupenyu hwezuva nezuva nekuvandudza mashandiro ayo uye nekumhanyisa kumhanya.
MuKeynote imwe chete takaona kuti avo vanobva kuCupertino vakawedzera sei kuwatchOS 3 nyowani yekuti wachi inogona kuongorora mafambiro emunhu ari pawiricheya, kusanganisira kutarisisa mafambiro aanoita kumavhiri.
Iye zvino yakawanda data yave ichizivikanwa iyo inovimbisa kuti iyo Apple Watch chizvarwa chechipiri chichava nehunhu huri nani mumvura kuitira kuti Inogona kushandiswa mumadziva ekushambira uye nekudaro kuongorora mashandiro evaya vanoshambira nechinzvimbo.
Kusvikira zuva ranhasi tese tinoziva kuti Apple Watch inodzivirira mvura uye ndiko kuti iyo Apple pachayo inoratidza pane peji rayo rekutsigira kuti kana korona inotenderera ikaomesa tinogona kuisa wachi pasi pemvura toifambisa kusvika kufamba kwayo kwanyanya. PaApple Tarisa 2 kuramba kwemvura kuchavandudzwa uye pamwe izvo zveCupertino zvinoratidza ipapo kuti inogona kunyatso shandiswa pasi pemvura.
Chimwe chinhu chitsva icho chechipiri vhezheni yeApple Watch ichasanganisira iko kuiswa kweGPS chip iyo yaizoibvumidza kuti itore iyo Mahofisi uye madaro akafamba pasina kutakura iyo iPhone newe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » GPS tekinoroji iri kuuya kuApple Watch 2
Maitiro ekusaina iyo PDF kubva kuMeyili app pane iOS